Akhriso: RW Kheyre oo shaqada ka joojiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga (Sababta) – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Akhriso: RW Kheyre oo shaqada ka joojiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga (Sababta)
Arbaco, October, 17, 2018(HNN) Mudane Xassan Cali Kheyre ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wareegto uu soo saaray shaqada uga joojiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Khaliif Diriye.
Wareegtada Shaqada looga joojiyey Mudane Maxamed Khaliif ayaa lagu xusay in Ra’iisul wasaare Kheyre oo tixgelinayo Waraaq codsi ah oo kasoo baxday Xafiiska Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka uu meel mariyey Ra’iisul Wasaaraha Shaqo ka joojinta Wasiir ku-xiggeenka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Soomaaliya.
Sidoo kale Wareegtada kasoo baxday Xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu wargeliyey Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka in waajibaadkiisa shaqo uu u guto si hufan oo Waafaqsan Dastuurka iyo Sharruucda dalka.
Cabdijamal Macalin Axmed.
Akhriso: RW Kheyre oo shaqada ka joojiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga (Sababta) added by admin on 17/10/2018